Hlaziya iwebhusayithi yakho ngezi Menyu zi-16 ziCascading Menus | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-16 yokudlula kwiimenyu ze-CSS zokuhlaziya iwebhusayithi yakho
Iimenyu ezilahlayo okanye ezilahlayo zezi ibalulekile phantse kulo naluphi na uhlobo lwewebhusayithi. Ngokukodwa abo bafuna ukwaziswa kwedatha ngumtyeleli, ezinje ngento elula njengokukhetha isini okanye ukukhetha umbala oza kuba yhempe oza kuyithenga kwi-eCommerce yethu.
1 Imenyu yamanzi
2 Imenyu yokwehla nge-jQuery
3 Uhlobo lweemenyu zamanzi
4 Imenyu yamanzi eengxangxasi
5 Iziphumo zemenyu yokwehla
6 Oopopayi Ingxangxasi kwimenyu
7 Nge-jQuery encinci: Imenyu yeengxangxasi
8 Imenyu entle eneengxangxasi
9 Imenyu yokwehla kwi-CSS
10 Imenyu yokwehla
11 Imenyu elula yamanzi
12 Ukuhamba kwemenyu ethe tyaba
13 Imenyu yokwehla kwi-CSS
14 Imenyu yamanzi engxangxasi eneJS encinci
15 Enye imenyu yeCSS emsulwa
16 Imenyu ye-Cascade yomqondo we-zig zag
Imenyu yokwehla nge-jQuery
Uhlobo lweemenyu zamanzi
Imenyu yamanzi eengxangxasi
Le menyu eyehlayo izama ukubonisa usetyenziso lwe ukulibaziseka oopopayi nganye yezinto ezivelayo xa ushiya isikhombisi semouse kwimenyu nganye. Kunye nezishumi ezimbalwa zokulibaziseka, oko kulindeleka kwesiphumo kufezekisiwe okunika umnqweno okhethekileyo.
Iziphumo zemenyu yokwehla
Njengokuba uthotho lwamakhadi ukusuka kumgangatho, oopopayi bale menyu yeengxangxasi kubaluleke kakhulu kuyo. Iziphumo ezintle zamanzi ezicocekileyo yi-CSS emsulwa. Sele uyayazi into ekufuneka uyenzile ukuyiphumeza kwindawo yakho.
Oopopayi Ingxangxasi kwimenyu
Nge-jQuery encinci: Imenyu yeengxangxasi
Imenyu entle eneengxangxasi
Imenyu yokwehla kwi-CSS
Un imenyu encinci yamanzi Kwaye iyilelwe kuphela kwi-CSS. Iopopayi elula, kodwa yenziwe kakuhle ukuze ingabonakali. Imenyu engaziwayo kwaye elandela imigangatho yoyilo lwangoku.
Le menyu ye-CSS emsulwa yenye owaziwa kakuhle ngoopopayi oko kwenzeka lonke ixesha sicofa kwimenyu. Oopopayi batyibilika ifestile ukusuka kwicala lasekunene ngexesha elifanelekileyo Enye yezona zinto zinomdla kulo lonke uluhlu.
Imenyu elula yamanzi
Le menyu ilula kwimvelaphi kwaye ine-HTML kunye neCSS. Enye yeemenyu esivumela ukuba sihlaziye loo nto ibalulekileyo kwiwebhusayithi yethu kwaye Musa ukunika ikheyi eninzi. Ndicinga ukuba kuyaqondakala kakuhle ukuba sithetha ntoni ngayo.
Ukuhamba kwemenyu ethe tyaba
Nangona sele kudibene iminyaka yakhe emi-4, le menyu yeengxangxasi igubungela elinye ecaleni kwayo ngendlela enobuchule. Ukuba ujonga into eyahlukileyo yenye onokukhetha kuluhlu.
Enye imenyu ngokukodwa kwiCSS kwaye inemibala eqaqambileyo, ubuncinci kulwenziwo olunikezwe kumzekelo. Ngemibala ethe tyaba, oopopayi batyhila isandi sokuqengqeleka esishiya amacandelo ahlukeneyo kwimenyu ekhethiweyo. Enye yeemenyu zempophoma ezinomdla kuluhlu olunomxholo okhethwe kakuhle.
Imenyu yamanzi engxangxasi eneJS encinci
Enye imenyu yeCSS emsulwa
Imenyu ehambayo kunye neentetho apho akukho kulibaziseka kumawaka Isibini. Iyavelisa ke ngoko nangoko undwendwe. Ukuhambisa isiphumo kunye nemenyu yokuhla enomdla ngaphandle kwempumelelo enkulu kwinqanaba ngokubanzi.
Imenyu ye-Cascade yomqondo we-zig zag
Ukuba ujonge imenyu ngaphandle koluhlu lonke kule post, le menyu iyehlayo inayo yonke into onokuyikhangela. Inkqubo ye- oopopayi baveliswa yi-zigzag ukubonelela ngolunye uhlobo lwamava kuvavanyo oluncinci. Inokulunga ngokugqibeleleyo kumxholo wevidiyo, ke ukuba unayo nayiphi na iklayenti ekhangela into eyahlukileyo, ngokuqinisekileyo lolona luhlu lufanelekileyo. Ubume bayo oblique kunye noopopayi abakhawulezayo bathi konke.
Sikushiya ne Olu luhlu lweemenyu zeCSS kwiwebhusayithi yakho elinenani elikhulu lazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » CSS » I-16 yokudlula kwiimenyu ze-CSS zokuhlaziya iwebhusayithi yakho
Umphumo wokutshaya ubuchwephesha ngeFotohop
Ibhalansi ye-asymmetric yesi siqwenga ichasa isiphumo esibi sesandla somntu